९ भदाै । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या ३३ हजार पाँच सय नाघेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ८ सय ५५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित संक्रमितको संख्या ३३ हजार पाँच सय ३३ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन् । संस्थागत आइसोलेसनमा आठ हजार पाँच सय ८१ जनाको उपचार भइरहेको छ। होम आइसेलेसनमा ५ हजार ६ सय ६९ जनाको उपचार भइराखेको छ। क्वारेन्टाइनमा १० हजार ८ सय ५३ जना रहेका छन्। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार १४ हजार २ सय ५० जना कोरोनाका सक्रिय बिरामी छन्। २४ घण्टामा ३ सय १३ जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या १९ हजार ११९ पुगेको छ। म‌गलबार मृत्यु भएका ७ जना समेत नेपालमा कोरोनाबाट १ सय ६४ जनाको मृत्यु भइ सकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन् । यसै गरी धादिङमा मंगलबार थप ८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँग धादिङमा १ सय ८४ जनामा संक्रमित भएका छन् ।